अफगानिस्तानमा मानवीय संकट: अन्धकार युगमा फस्दै, १८ प्रान्त तालिवानको कब्जामा - Pahilo Click
अफगानिस्तानमा मानवीय संकट: अन्धकार युगमा फस्दै, १८ प्रान्त तालिवानको कब्जामा
August 14, 2021 |Pahiloclick
एजेन्सी: ‘म खतरामा छु तर मैले आफ्नोबारेमा केही सोचेको छैन । सोचेको छु त केवल मेरो देशबारे । हालसम्मको परिवर्तनमा ल्याइपुर्‍याउने मेरो पुस्ताबारे पनि सोचिरहेको छु ।’अफगान फिल्म निर्माता सारा करिमीले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भनेको अंश हो यो । उनले अफगानिस्तानलाई लिएर विश्व पुरानै दिनमा फर्किएको उल्लेख गर्दै फेरि उही ‘अन्धकार युग’ दोहोरिनेमा आफू चिन्तित बनेको बताएकी छन् ।
कान्दाहारमा तालिबान लडाकु । तस्बिर : एएफपी
सन् १९९० ताका अफगानिस्तानमा तालिवानको शासन थियो । जतिखेर १० वर्षभन्दा बढी उमेरका किशोरीलाई औपचारिक शिक्षा लिन बन्देज थियो । घरभित्र होस् या बाहिर, महिलालाई बुर्खा अनिवार्य थियो । यस्ता नियम उल्लंघन गरेको खण्डमा हदैसम्मको सजाय दिइन्थ्यो ।
मुस्लिम कट्टरपन्थी तालिवान समूहको विशेषता धर्मलाई केन्द्रमा राख्दै पुरातन सोच र संस्कृतिअनुसार शासन चलाउनु हो । विश्व प्रविधिको युगमा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा अफगानिस्तान भने उही पुरानै युगमा फर्किन लागेको भन्दै अफगानी जनता चिन्तित छन् । त्यसमा पनि बाँचिने हो कि होइन भन्ने अन्योलमा हजारौं नागरिक सुरक्षित बासस्थलको खोजीमा भौंतारिरहेका छन् ।
किन कमजोर बन्यो अफगान फौज ?
तालिवान लडाकुका अघि अफगान सुरक्षा फौज तासको पत्ताजस्तै गरी ढल्नुलाई अचम्मका रूपमा लिइएको छ । पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा असरफ घानी नेतृत्वको अफगान सरकार आत्मसमर्पणको अवस्थामा पुग्नै लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन् । यसै साता बाहिरिएको एक अमेरिकी गोप्य प्रतिवेदनमा आगामी एक साताभित्र काबुल तालिवानको नियन्त्रणमा आइसक्ने र ९० दिनभित्र वर्तमान सरकार गिर्ने आकलन गरिएको छ । पछिल्लो २० वर्षसम्म अमेरिका र बेलायतजस्ता शक्तिशाली मुलुकका सुरक्षाकर्मीसँग सहकार्य गरिरहेका अफगान सुरक्षाकर्मीको अवस्था यति दयनीय कसरी हुन पुग्यो भनी विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ ।
अफगानिस्तानको लोगर पान्तमा तैनाथ अमेरिकी सेना । फाइल तस्बिर : रोयटर्स
यसबीचमा अमेरिकी र बेलायती अधिकारीहरूले भने ३ लाखको संख्यामा रहेको अफगान सुरक्षा फौज बलियो रहेको र झन्डै ६० हजारको तालिवान फौजलाई परास्त गर्न सक्ने भन्दै दाबी गरिरहेका थिए । उनीहरूको दाबीविपरीत तालिवानको प्रभाव निरन्तर बढ्दो छ । अमेरिकी कम्ब्याटिङ टेरोरिज्म सेन्टरले भने तालिवानलाई थप २ लाख मिलिसिया ग्रुप र समर्थकको साथ रहेको आकलन गरेको छ ।
अमेरिकी कंग्रेसमा प्रस्तुत स्पेसल इन्स्पेक्टर जेनेरल फर अफगानिस्तान (एसआईजीएआर) को पछिल्लो रिपोर्टअनुसार भ्रष्ट र आत्मघाती सैनिकका कारण अफगान सेना कमजोर बन्न पुगेको औंल्याइएको छ । सुरक्षा फौजको वास्तविक बललाई लिएर प्रस्तुत तथ्यांकमा समेत प्रश्न उठाइएको छ । रोयल युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युटका ज्याक वाटलिङले अफगान सेनालाई आफूसँग कति संख्यामा फौज रहेको समेत थाहा नभएको बताएका छन् । उनले थपेका छन्, ‘उनीहरूसँग आफूसँग भएका हातहतियार व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको पनि कमी देखिएको छ ।’
अफगानिस्तानमा जारी हिंसाबाट बच्न पाकिस्तान जानका लागि सीमा पुगेका सर्वसाधारण । तस्बिर : रोयटर्स
विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) ले काबुलमा खाद्य संकट गहिरिएको जनाउँदै मानवीय विपत्ति आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । डब्लूएफपीका प्रवक्ता थम्सन फिरीले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘अफगानिस्तानका १४ मिलियनमध्ये ३ जनामा १ नागरिकले खाद्य संकट भोगिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार थप २ मिलियन बालबालिका कुपोषणविरुद्धको उपचारको पर्खाइमा छन् । ‘हामी त्रसित छौं कि योभन्दा अझै दयनीय अवस्था छिट्टै नै आउनेछ,’ उनले भने । डब्लूएफपीका अनुसार आधाभन्दा धेरै अफगान नाागरिक यसअघि नै गरिबीको रेखामुनि छन् । उनीहरूको दैनिक आय १.२५ अमेरिकी डलरभन्दा कम छ । यहाँ दुई तिहाइ जनसंख्या २५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । हाल कायम खाद्य संकटले अफगानिस्तानको भविष्यमाथि नै गम्भीर चुनौती खडा गरिदिएको राष्ट्रसंघको ठहर छ ।
तालिवान समूहको बढ्दो प्रभावका बीच अमेरिका र बेलायत बढी दबाबमा देखिएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानमा उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक तथा अन्य संकट र अमेरिकी कदमबारे छलफलका लागि आकस्मिक ‘कोब्रा क्याबिनेट’ बैठक डाकेका छन् । आफ्ना नागरिक तथा दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीलाई सुरक्षित स्वदेश फर्काउन अमेरिकाले ३ हजार सेना अफगानिस्तान पठाएको छ । अमेरिकाले आगामी ३० दिनभित्र पूरा अफगानिस्तान तालिवानको कब्जामा पुग्ने आकलनसहित यस्तो कदम चालेको राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासनका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ । आगामी दिनमा अफगानिस्तानसँग राजनीतिक र कूटनीतिक सम्पर्क जारी राख्ने पनि किर्बीले स्पष्ट पारेका छन् ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकन र रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै अमेरिकाको सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकहरूले काबुलस्थित आफ्ना दूतावासका कर्मचारी र नागरिकलाई विभिन्न माध्यममार्फत स्वदेश फर्काउँदै छन् । उता बेलायतले आफ्ना नागरिक र दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीको उद्धारका लागि सैनिक पठाउने घोषणा गरिसकेको छ । अफगानिस्तानको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफलका लागि बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पनि आकस्मिक रूपमा कोब्रा सेक्युरिटी क्याबिनेटको बैठक डाकेका छन् । जोन्सनले अफगानिस्तानमा पछिल्लो २० वर्षसम्म चलेको सुरक्षा कारबाहीको बचाउ गर्दै त्यसमा गर्व गर्ने बताएका हुन् । बेलायती विदेशमन्त्रीले भने अफगानिस्तान गृहयुद्धमा फस्न सक्ने आकलन गरेका छन् ।
सीबीएस टिभीका सीइओ मुन्भेसविरुद्ध ६ महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको खुलासा
चार लाख नगदसहित सत्र जुवाडे पक्राउ, को को परे ?
एडिबीले क्वारिन्टाइन सुधारका लागि ३६ करोड सहायता दिने
विमानस्थलले उठायो ५५ करोड बढी बक्यौता, अझै डेढ अर्ब बाँकी
भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८२४ पुग्यो, २६ हजारभन्दा बढी संक्रमित